Dhageyso: Siyaasiga Prof Macow Dalxa oo rajo fiican ka muujiyey natiijada shirka Maamulka Koonfur Galbeed. – idalenews.com
Prof Cali Macow Dalxa oo ka mid ah siyaasiyiinta Beelaha Digil iyo Mirifle ee gobolka Shabeelaha Hoose isla markaasna ah macalin wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dadka ka soo jeeda gobolka Shabeelaha Hoose aad u taageersan yihiin shirka Baydhaba ka socda, waxuuna sidoo kale sheegay in aan la aqbali karin in gobolada koonfureed ee lixda ah la kala qeybiyo.
Aqoonyahankaani oo iminka joogo magaalada Baydhabo ayaa u sheegey warbaahinta maxalig ah inuu isaga iyo dadka kale ee reer KG galbeed ay Baydhabo uu joogaan ka qaybgalka iyo dhameystirka dhismaha dowlada KG soomaaliya, islamarkaana waxa uu intaa ku darey inuu waqtigiisu iyo halwlahiisu ugu soo tagey dhisida maamulka ka kooban lix-gobol ee koonfurta soomaaliya.
Prof. Cali Macow Dhalxa, ayaa sidoo kale waxa uu digniin adag u direy kuwo doonayo in ay fashiliyaan ama ku howlanyihiin burburinta rajada iyo rabitaanka shacbiga koonfurta soomaalia.
Si kastaba ha ahaatee, waxa dhawaanahan isu soo tarayaa taagyeerida Maamul goboleedka kG soomaaliya iyo weliba digniino adag oo wajahan calooshood u shaqeystiyaal la sheegey in magaalada Baydhabo u joogaan in ay fashiliyaan shirka muddada sanadka ku dhow ka socday magaalada Baydhabo ee maamul loogu aameynaayo lix gobol oo koonfurta Somalia ah.
Daawo: Qaar ka mid xubnaha barlamaanka oo madaxweynaha u jeediyey talooyinka ku aadan magacaabista R/W Cusub